-शारदा गैरे कोरोनाभाइरस संक्रमण फैलावटका सुरुवाती दिनमा नेपाल निकै सुरक्षित महसुस गरिएको थियो । यद्यपि पछिल्लो समय भने नेपाल एक संक्रमण हटस्पटकै रुपमा पो आउला कि भन्ने त्रास आम मानिसमा फैलिएको छ । हुन...
हाम्रो देश नेपाल र नेपाली समाज सनातन धर्म, संस्कृति र अतिप्राचीन मानव सभ्यताको अनुपम जगमा उभिएको छ । विश्वका प्राचीन सभ्यता र ती सभ्यताको जगमा विकास भएका अन्य राष्ट्रहरूभन्दा यो भूमिले पृथक पहिचान बोकेको...
-शारदा गैरे संसारभर कोरोनाको कहर कम भएको छैन । कोरोना भाइरस कोभिड १९ हाल विश्वभरि फैलिरहेको छ । नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको अवस्था भयावह बन्दै गैरहेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार संक्रमितको...
विमल योगी (विनोद) एक दिनपछि सबैको घर–घरमा दशैँ प्रवेश गर्दै छ । कोरोना महामारीका कारण यस पटकको दशैँ विगतको जस्तो हुनेछैन । पहिला जस्तो सहज रुपमा घुमफिर गर्ने अवस्था छैन । टीका र आशीर्वाद...
कोरोनाले समाजलाई के दियो, के छिन्यो ? यस्ता छन् फाइदा र खतराहरु
-एसपी उप्रेती मानव अस्तित्वले सदियौँदेखि विभिन्न किसिमका समस्याहरु झेल्दै आएको छ । बीबीसीको एक रिपोर्टअनुसार विगत २ सय वर्षको अवधिमा मानिसले करिब आधा दर्जन बढी महामारीकै प्रभाव खेपेको छ । तर यसरी विश्व नै...
कोरोनाले गर्दा पत्रकारहरू पलायन हुने अवस्थामा
विमल योगी (विनोद) कोरोना महामारीले अनलाइन पत्रकारहरूलाई पनि छाडेको छैन । सञ्चारकर्मीहरू दैनिक सरह संक्रमित र प्रभावित बनिरहेका छन् । घर र कार्यालयमा बसेर काम गरे पनि दैनिक जनजीविकासँग जोडिएका कार्यहरूका कारण सञ्चारकर्मीहरू कोरोनासँग...
कोभिड-१९ प्रभाव : आत्महत्या तथा मनोसामाजिक समस्या, कसरी बच्न सकिन्छ ?
-एसपी उप्रेती आउनुस् आज आत्महत्याका बारेमा कुरा गरौँ । एक चोटी सोच्नुस् त कसले आफ्नो जीवन आफैँ किन त्याग्न चाहन्छ होला ? साँच्चै मानिसलाई त्यस्तो के कुराले यो भयानक निर्णय लिन बाध्य बनाउँदो हो...
-होमराज श्रेष्ठ एउटा मुर्तिकारले धेरै नै मेहेनत गरेर मुर्ती बनायो । आफुले बनाएको मुर्ति धेरै राम्रो लागेर आफ्नो गुरुलाई भेटेर आफुले राम्रो मुर्ती बनाएको भनेर देखायो । गुरु पनि खुशी भए । मुर्तिकारले गुरुलाई...
म एकसातासम्म कोरोना संक्रमित भएर आइसोलेसनमा रहनुपर्यो । असोज १७ देखि २३ गतेसम्मको मेरो अनुभवले कोरोना कडा अनुशासन पालना गरी लड्नुपर्ने महामारी हो र यससँग लापरबाही गर्नु जीवनकै खेलबाड हो । व्यक्तिगत रूपमा बितेको...
दलित आन्दोलनको अबको बाटो : जात व्यवस्थाको संरचनाविरुद्ध
-सन्तोष विक राजनीतिक व्यवस्था फेरियो, राजनीति गर्ने पात्र फेरिए, भौतिक विकास क्रमिकरुपमा भैरहेको छ । तर विडम्वना गलत सोच र सँस्कार परिवर्तन हुन सकेको छैन । भाषणमा बाहिर बाहिर भेदभाव गर्दिन भन्नेहरुले पनि ब्यवहारमा...
-हिरा खड्गी वर्षा याम पछि काठमाडौँको उत्तरी भेगमा जब बादलहरू हटेर निला आकाश र सेता हिमाल देखिन थाल्छ । तब मनमा एक किसिमको रमाहतको अनुभुति हुन्छ । सेप्टेम्बर महिनाकको शुरूबाट नै प्राय आकाश सफा...
कोरोना र चाडपर्वबारे गाउँमा रहेका बुबा-आमालाई पत्र
पूजनीय बुबाआमा, ढोग छ, कुशल छु, कुशलताको कामना गर्दछु । काठमाडौ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण समुदायमा फैलिएको छ । जहाँ टेस्ट गर्यो, जसलाई टेस्ट गर्यो अधिकांशको पोजिटिभ देखिएको छ । हाम्रो सुर्के पाटोभन्दा साँघुरो छ,...